Su'aal: Qofka xaaskiisa ma ka fogaanayaa?
Author Topic: Su'aal: Qofka xaaskiisa ma ka fogaanayaa? (Read 2897 times)
« on: October 01, 2018, 11:32:53 PM »
Asc doctor wa ku mahadsantahy howsha dad weenaha somaliyed a uheeso ilahy ajar iyo xasanad haka siyo.
Dactor wxan rba inan kiweediyo sual o ah somalida badana aya dhahda qof marka u jabo ama u dhawacmo xaskisa wa inu kafogaada, marunba warkaaa maxu cfimadka ka qabaa ? Mudo miya jirta qofka u kafoganayo arinkaa?
Re: Su'aal: Qofka xaaskiisa ma ka fogaanayaa?
« Reply #1 on: February 08, 2019, 09:10:50 PM »
Taasi waa fikrad khaldan, sax ma ahan hadduu qof jaban xaaskiisa u galmoodo inuusan kabmaynin, laakiin way jiraan walxo dib u dhigo kabniinka lafaha iyo waxyaabo dadajiyo ee ka akhriso qoraalkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=6485.0
Views: 12713 January 16, 2010, 06:58:41 PM
Views: 7303 November 21, 2011, 10:09:15 PM
Views: 6109 March 25, 2016, 09:18:40 PM
Su'aal: Xameytada oo dhagaxan gala maxuu qofka dareemi karaa?
Started by Filsan AliBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 13091 May 01, 2011, 09:49:05 PM
by Filsan Ali
Started by AnwarBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 15006 July 10, 2011, 08:10:55 PM